Ethandwa umlingisi Canadian, nosomahlaya, umkhiqizi kanye screenwriter Dzhon Kendi wazalwa-October 31, 1950 ku Newmarket, eduze Toronto. Babaziwa Ngokungenisa eziningi amahlaya amabhayisikobho, njengokuthi "Izindiza, Izitimela nezimoto", "Bacon Canadian" futhi "uMalume Buck."
Ezemfundo kanye ukuqopha
Dzhon Kendi waqala kokwenza umsebenzi esiteji yaseshashalazini zezingane kanye lapho usukhulile wangena Faculty of Journalism wase-University of McMaster ke wazama isandla sakhe ifilimu. Candy wangenela in the 1973 ifilimu, enesihloko esithi "Class of '44". Khona-ke lo umlingisi iqhaza eziningana ongaphakeme-isabelomali ifilimu imikhiqizo eziye kunakwe ehhovisi ibhokisi.
John Candy movie okuyinto iqhaza akuyona okunabileko izethameli, isibe usomahlaya ethandwa kanye kuphela uvele the comedy satirical "1941," kuqondiswe yi Stivenom Spilbergom 1979. Lodumo uye kungezwe futhi bahlanganyela movie "Splash" noTom Hanks e indima isihloko, bese movie "Izigidi Brewster sika", ngemva kwalokho uJohane eyaduma.
Ekuqaleni '80s Dzhon Kendi yazihlanganisa ukuzijabulisa amaphrojekthi ku-TV, njenge-Okwesibili City Ithelevishini, ngaphandle kokushiya ebhayisikobho. Yena bakwazile ukuhlanganisa ezihlukahlukene ye-TV ukusebenza izindima amahlaya e ifilimu, isikhathi esanele sokuba konke. Sekuphele iminyaka eyishumi, Candy izinkanyezi ku engaphezu kwamashumi amabili sici amafilimu.
Nokho, kusukela ngo-1990, kushintshile inhlanhla umlingisi, nokuduma wakhe aqala ukuncipha. izindima eziningana akuphumelelanga ilandelana, noJohane Candy movie okuyinto kakade ezingafakwanga phakathi kwabayishumi abaphasa ngamalengiso, baba ngisho ezingadumile kakhulu.
Kwathi kusenjalo antipremiyu umlingisi uqokelwe "Razzie" ngoba ukusebenza phambili female ku ahlekisayo "Abanye enkingeni." Ngo isethulo futhi wawulotshwe "Umlingisikazi Worst Ukusekela". Ababili ngaphezulu ifilimu akuphumelelanga ngokuphathelene naleso sikhathi: "Once Upon a Ubugebengu" futhi "Delirious" - uqedele isithombe ekuncipheni Dzhona Kendi.
Nokho, umlingisi, wakhetha ukungahlukanisi adikile wenza umzamo ukunweba line, okwenezela kwempahla yayo izindima ngaphezulu umuzwa amadlingozi. Yena inkanyezi ku Thriller zezombusazwe Olivera Stouna "Dzhon Kennedi. Shots e Dallas," lapho kudlalwa ummeli esigwegwile Dina Endryusa.
Noma kunjalo, Dzhon Kendi - kumdlali wasesiteji odlala uye wanquma ukuba abe usomabhizinisi. Kuze kube yimanje, yena nabangane bakhe Wayne Gretzky futhi Bruce MikNallom wathenga iqembu, "Toronto Argonauts", okuyinto udlala ibhola Canadian.
Hambisa senziwa kweqiniso: ukuthenga amaqembu ezemidlalo osaziwayo ezifana ayikwazanga azithalalise, isenzo yabakhanga umphakathi kanye nabezindaba. Abanikazi entsha "Argonauts" bedele okuningi imali yokufuna abadlali abanamakhono nesokuphela kwalesi eside izinkontileka ukuthengisa.
Nokufa ngokungalindelekile kwesihlobo umlingisi
Impilo ka-Dzhona Kendi lwaphuka Mashi 4, 1994, lapho eneminyaka engu eMexico ku isethi movie "Caravan uye eMpumalanga." Lo mlingisi washona elele kusukela okungazelelwe ukuboshwa inhliziyo. Kuyaphawuleka ukuthi ngaphambi nje kokufa kwakhe Candy wakhuluma ocingweni nabangani bakho bonke, kuhlanganise Larry Smith ezemidlalo sibalo, futhi wabatshela ukuthi iqembu wadubula "Argonauts Toronto" ngokugcwele futhi ucele abameli ukubeka ukuwudayisa.
Umlingisi John Candy ahlekisayo lapho engena uhlu cinema emhlabeni, wembelwa Holy Cross Cemetery in Culver City, eCalifornia City.
Dzhona Kendi ubuntu Canadian immortalized "Hamba Lodumo". Ngo-May 2006, lo umlingisi iwine ngomfanekiso wakhe oku isitembu sokuposa ye-National Postal Service yaseCanada. Ngo-2000, ikhumbule Candy, wadedelwa enye inkondlo elama kuya movie "The Blues Brothers", inguqulo yasekuqaleni okuyinto wadutshulwa 1980. The esiphezulu ezemidlalo umklomelo e-Canada - lo wama-95 Gray Cup - lanikezelwa ngo-2007 kuJohane Candy.
LamaRoma Katolika esikoleni esiphakeme esifundeni Scarborough Toronto ukhishwa art yakhe studio igama Dzhona Kendi, wangaphambili iziqu. Amazwi akhe ziboniswa Kulolu qwembe lwesikhumbuzo, kanye uyezwakala "Basics of impumelelo sibekwa amagugu ukuphila ukuthi kwagxilisa kimi esikoleni, kanye kumigomo ukuhloniphana nesiyalo. '
John Candy kwesokunxele izingane ezimbili: indodana Christopher nendodakazi Jennifer. Owayeyintombi yakhe unkosikazi Rosemary Hobor ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi bekhulisa esizukulwaneni esisha. Adult Jennifer njengamanje usebenzela TV umkhiqizi, ehhovisi lakhe, "Sam 7 Abangane" Uhlelo kanye "iNdlovukazi Prom."
Alex Smurfit - umyeni kaVictoria Boney. Biography kanye nomlando ukuphola
Toru Okawa - umlingisi losemcoka anime "Volleyball"
Ukufundiswa nokuqeqeshwa izinja e eMoscow nesifunda eMoscow
Ukulunywa e imbilapho kwabesilisa